1. Imaski yokhuselo lwezonyango
Ngokuhambelana ne-gb19083-2003 iimfuno zobugcisa zokuphefumla kunyango, izalathi ezibalulekileyo zobuchwepheshe zibandakanya ukusebenza ngokufezekisiweyo kunye nokuchaphazeleka komoya kumasuntswana angengowamafutha:
(1) Ukusebenza kokufayilisha: phantsi kwendawo yokuhamba komoya (85 ± 2) L / min, ukusebenza ngokufayilweyo komphakamo we-aerodynamics (0,24 ± 0.06) m ye-sodium chloride aerosol ayikho ngaphantsi kwe-95%, Oko kukuthi, kuyahambelana ukuya ku-N95 (okanye i-FFP2) nangaphezulu.
(2) Ukuxhathisa okukhuthazayo: phantsi kweemeko zokuhamba okungasentla, ukunganyangekiyo akuyi kudlula 343.2pa (35mmH2O).
2. Imaski yokuhlinzwa
Ngokuhambelana ne-YY 0469-2004 yeemfuno zobugcisa kwiimaski zokuhlinzwa, izikhombisi ezibalulekileyo zobuchwephesha zibandakanya ukusebenza ngokufayilwayo, ukusebenza ngokuchanekileyo kokufakelwa kwentsholongwane kunye nokumelana nokuphefumla:
(1) Ukusebenza kokufayilisha: phantsi kwendawo yokuhamba komoya (30 ± 2) L / min, ukusebenza ngokufayilweyo komphakamo we-aerodynamics (0,24 24 0.06) m ye-sodium chloride aerosol ayikho ngaphantsi kwe-30%;
(2) Ukusebenza kokufakelwa kwebhakteriya: phantsi kweemeko ezichaziweyo, ukusebenza ngokufilikayo kwe-staphylococcus aureus aerosol ngobubanzi be-particle di (3 ± 0.3) m akukho ngaphantsi kwe-95%;
(3) Ukuxhathisa ukuphefumla: phantsi kwemeko yokuhamba kokusebenza kokufayilisha, ukumelana nokukhuthaza akufuneki kudlule kwi-49Pa, kwaye ukuxhathisa okuphuma ngaphakathi akufuneki kudlule kwi-29.4pa.
3. Imaski yokuhlinzwa ngokubanzi
Ngokuhambelana nemigangatho yemveliso efanelekileyo ebhalisiweyo (YZB), iimfuno zokufayilisha zamasuntswana kunye neebhakteriya ziyasilela, okanye iimfuno zokufayilisha kwamasuntswana kunye neebhakteriya zingaphantsi kunezo zisetyenziselwa imaski kunye nemiphunga yokuphefumla.